The elections will be the first since long-time ruler Robert Mugabe was removed from power last November following a brief military takeover (AFP Photo/Zinyange Auntony)
Harare (AFP) - The European Union will deploy observers to Zimbabwe's general election expected in July, the first time in 16 years the bloc will monitor polls in the southern African country.
The EU and Zimbabwe's government signed a memorandum on Monday outlining guidelines for election monitors.
Mugabe's successor President Emmerson Mnangagwa, 75, will be squaring off against Nelson Chamisa, 40, of the opposition Movement for Democratic Change.
"EU welcomes the commitment of the government to peaceful, credible, inclusive and transparent elections," Philippe Van Damme, head of the EU delegation in Zimbabwe, said after signing the memorandum with Zimbabwe’s foreign minister Sibusiso Moyo.
The new government's "desire to have transparency in the election process (by) inviting different international observers so that they can come and observe our elections... and observe democracy in action," Moyo told journalists after the signing.
The National Democratic Institute and the International Republican Institute said in a statement they were deploying a joint mission "in response to President Emmerson Mnangagwa's public statements welcoming international observers to monitor the upcoming Zimbabwe elections".